Ukusakazwa kwe-Cantaloupe kuvela enzalweni.
Ukutshala kwenziwa ngokuhlwanyela ngqo noma ukutshala imbewu ye-cantaloupe noma ngokuqala ukukhiqiza izithombo emibhedeni yembewu bese utshala izitshalo endaweni yokukhiqiza.
Izitshalo zihlukanisiwe phakathi kuka-50 - 75 cm emigqeni ehlukaniswe ngamasentimitha angu-100 - 200. Lokhu kuphakathi kuka 4000 no 6000 izitshalo zama-cantaloupe ehektheleni ngalinye. Imigqa yokufinyelela yezixhobo kanye namatrakta kumele ashiywe ukupuniza nokuvuna.
Ukutshala ngokuqondile imbewu kuvela ekupheleni kukaNcwaba kuya kuNovemba eNingizimu Afrika. Imbewu ingahlwanyelwa ibe izitshalo futhi itshalwe esitheni sokushisa kusukela ekuqaleni kukaJulayi kuze kube yizimbewu ezilungele ukutshala phakathi no-Agasti uma isimo sezulu sesiqale ukufudumala ngaleso sikhathi.
Njengoba i-cantaloupe isitshalo sokushisa sezulu esifudumele kusukela ekuqaleni kukaSepthemba kuya phakathi kukaDisemba. Ezindaweni ezifudumayo lapho isimo sezulu esishisayo esifudumele sifika ngaphambi kokutshala kuqala singaqala phakathi no-Agasti.
Isikhathi sokukhula esivela imbewu kuya ekukhiqizeni ngokuvamile sivela emavikini angu-12 ezindaweni ezifudumele kuya emavikini angu-15 ezindaweni lapho isimo sezulu sasekuseni sihamba kancane ukufudumala.
Kungcono ngaso sonke isikhathi ukwenza ukuhlaziywa kwenhlabathi efanele ukuze uqiniseke ukuthi izidingo zomhlabathi zifanele. Umhlahlandlela omuhle wokutshala umquba kanje:
Umquba, ilayimi nomanyolo iyalinywa ngenkathi ilungiselela inhlabathi emasontweni amane kuya kwayisithupha ngaphambi kokutshala. Isicelo esingaphambi kwesitshalo esiphakathi kuka-750 no-1000 kg we-2: 3: 4 (27) ingxube yomanyolo ehektheleni isakazwa phezu kwemigqa yezitshalo kanye ne-diski eboshiwe enhlabathini engaphezulu kuka-20 ngaphambi kokutshala kwezithombo.
Emasontweni amane kuya kwamasonto ayisithupha emva kokutshala kufaka isicelo esingaphezu kuka 300 kuya ku-500 kg we-2: 3: 4 (27) ngehektare ukuqinisekisa ukukhula okuhle kanye nesethi yezithelo. Ukuqapha ukukhula kanye nesethi yezithelo futhi uma kubonakala kudingekile kusebenza isicelo sesithathu se-350 kg ngehektare ngalinye le-Potassium Nitrate ukusiza ukukhula nokwandisa ukuthuthukiswa kwezithelo. Uma kulesi sigaba ukukhula kunamandla okwenza i-Potassium Chloride esikhundleni seNitrate ye-Potassium. Kulesi sigaba kubaluleke kakhulu ukutshala ikhwalithi yezithelo kunokukhula komquba.
Khumbula ukuchelela emva kokusebenza komanyolo.
Nisela ngaphambi nangemva kokutshala imbewu noma izithombo. Uma ukutshala izithombo kusiza ukunciphisa ukucindezeleka ezitshalweni ezintsha. Qiniseka ukuthi unciphisa ukucindezeleka kwenhlabathi. Uma kungenzeka ukufaka umhlabathi umswakama amamitha futhi uma lokhu kungenakwenzeka hlola inhlabathi yendawo yezimpande okungenani kabili ngeviki ngefosholo.
Ukunisela okuhle kuphakathi kuka-25 no-35 mm ngesonto. Kuye ngohlobo lomhlabathi lokhu kungenziwa ngezinhlelo ezimbili noma ezintathu ngesonto.